StumbleUpon dia manohy mamahana ny bilaogiko | Martech Zone
Talata, Novambra 18, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Anio hariva aho dia nandinika ny sasany amin'ireo tranonkala miresaka momba ny bilaogiko ary tsy afaka ny tsy hahita ny antontan'isa izay misongadina kokoa noho ny hafa rehetra - StumbleUpon mitondra fifamoivoizana be dia be mankany amin'ny tranokalako! Betsaka ny tranonkala manoritra eo amin'ny Internet, saingy ny StumbleUpon dia manana tombony stratejika iray izay tsy ananan'ny hafa akory - manome rohy mahaliana izy ireo.
Rehefa entinao ny Fitaovana StumbleUpon (izay ianao tanteraka tokony), ianao tafintohina amin'ny tranokala ary omeo ankihibe na ankihiben-tanana izy ireo. Rehefa mamorona tantara ianao, ireo tranonkala alefan'ny StumbleUpon anao manaraka dia mifanaraka amin'ny fahafahanao manome azy ireo ankihibe. Dingana miavaka izay manam-pahaizana tokoa.
Angamba zava-dehibe kokoa noho ny isan'ny mpitsidika alefan'ny StumbleUpon amiko ny tranokala manondro manana taha ambony ambany dia ambany tokoa! Manodidina ny antsasaky ny olona nalefa tany amin'ny tranokalako no tsindrio amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na pejy iray hafa ao amin'ny tranonkala. Izany dia taha ambany ambany indrindra, ambany noho ny tranonkala miresaka rehetra.
Tsy toy ny Slashdot, Digg, ary ireo motera fanoratam-boky lehibe hafa, StumbleUpon dia tena manana ny "Midas touch", manome ny bilaoginao na tranokalanao fifamoivoizana hahitanao ny atiny manan-danja mifototra amin'ny mombamomba izay novolavolain'izy ireo tamin'ny tian'ny mpitsidika anao sy ny tsy tiany.
Fisaorana lehibe ho an'ny iray amin'ireo mpanondro lohany amin'ny tranokalako, Bittbox. Nandefa fifamoivoizana bebe kokoa izy ireo tamin'ny fampidirana ahy ho any amin'ny blogroll-ny noho ny tokony ho fanampiana azy ireo. Raha vao manomboka ianao na mpanakanto sary efa za-draharaha, dia aza hadino ny mijery ny tranokala Bittbox ary misoratra anarana ho an'ny sakafony. Izy io dia tranonkala mahatalanjona miaraka amin'ny lesona amin'ny antsipiriany sy fampidinana an-taonina.
Jereo koa izany Twitter mandady ny referraly! Raha mbola tsy nanangana Twitterfeed ianao na nanampy mekanika fanaraha-maso ho an'ny bilaoginao mba halefa ao amin'ny Twitter dia tsy maintsy ataonao anio izany!
19 Nov 2008 amin'ny 9:45 maraina
Ho fanampin'ny famoahana ny pejinao manokana amin'ireto loharano ireto dia makà fotoana hikorontanana na Twitter momba ny namana iray. Raha tsy manontany dia averin'izy ireo matetika ilay fankasitrahana, ary misy fahatokisana bebe kokoa rehefa misy olon-kafa miresaka momba anao, Retweets, Stumbles na Diggs.
1 Nov 2010 amin'ny 9:26 maraina
Nametra-panontaniana foana aho ny amin'ny tanjona sy ny lanjan'ilay fanoratam-boky ara-tsosialy. Na dia hitako aza ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny bilaoginay avy amin'ny StumbleUpon, dia gaga aho fa mampiasa ny serivisy ny olona.
1 Nov 2010 amin'ny 9:31 maraina
Tsy miombon-kevitra @ chuckgose aho. Mieritreritra aho fa ny olon-tsotra sasany dia variana amin'ny fitaovana hafa. Misy vahoaka noana anefa any amin'ny faran'ny tranonkala hafa, na izany aza. Raha toa ka mahavita fifamoivoizana mifandraika amin'izany ny fandefasana tsoratadidy etsy sy eroa, maninona raha?
1 Nov 2010 amin'ny 10:58 maraina
Ny iray amin'ireo olana amin'ny fahatafintohinana na dia miankina amin'ny fitsapana aza dia firy amin'izy ireo no tena mifanerasera amin'ny tranokalanao? Nahamarika vitsivitsy tamin'ireo tranokalako nipoitra niaraka tamina nomerao marobe fatratra aho noho ny fahatafintohinana, ny zavatra telo hafa mitarika ny fifamoivoizana, saingy ny isan'ny fanehoan-kevitra dia mijanona hatrany. Ny ora salan'isa amin'ny tranokala dia tsy tena niova koa. Fantatro fa fifamoivoizana ny fifamoivoizana, nefa mandritra izany fotoana izany, ahoana no mahasoa raha mitsatoka ilay tranonkala ny olona ary miala ao anatin'ny fotoana fohy ary tsy mandeha any amin'ny pejy hafa…
Eritreritra vitsivitsy ao ambadiky ny saiko fotsiny, tiako ny handre izay eritreritrao ao 🙂